7 Inta Badan Meelo La Awoodi Karo Oo Loogu Safro Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Inta Badan Meelo La Awoodi Karo Oo Loogu Safro Yurub
Qaar ka mid ah aragtiyada ugu quruxda badan Yurub waa kuwo aan qiimo lahayn oo ay fududahay in la gaaro. Si kastaba ha ahaatee, safarka Yurub aad buu qaali u noqon karaa haddii aadan horay u qorsheysan. Halka inta badan caasimadaha yurub ay kala bixin doonaan miisaaniyada safarkaaga, waxaa jira meelo aad u tiro yar oo loo safro Yurub kuwaas oo gabi ahaanba la awoodi karo. Korkeenna 7 inta badan meelaha la awoodi karo ee loogu safro Yurub gabi ahaanba waa miisaaniyad-saaxiibtinimo oo kama badnaan doonto € 50 qofkiiba.
Guntooyinkan qarsoon ma ahan kuwo aad uga dambeeya quruxda iyo sixirka, ka dib magaalooyin sida Paris iyo Berlin.
1. Meelaha ugu Awooda Badan Yurub: Cologne, Germany
Halka Jarmalku qaali yahay, Cologne waa mid ka mid ah meelaha ugu jaban ee la booqdo Yurub. Laga soo bilaabo hoyga miisaaniyadeed-saaxiibtinimo illaa astaamo caan ah oo bilaash ah iyo gaadiid raqiis ah, Cologne hubaal waa a magaalada weyn ikhtiyaar u ah haddii aad keli u safreyso ama aad qorsheyneyso safar reerka Euro ah.
Magaaladan Jarmalka waxay hoy u tahay biirka Kolsch, markaa waxaad ku dhadhamin kartaa macmacaanka Jarmalka kaliya German 1.30. Ma jiraan wax ka fiican sidii loogu raaxeysan lahaa pint bangiyada Webiga Rhein ee quruxda badan, maalin ka dib magaalada. Hubso inaad ku dhex socotid Ficshmarkt si aad u hesho boodhadh u eg kaarka oo leh guryaha midabada leh oo aad u sii socoto Old Town, Altstadt.
Intaa waxaa dheer, astaamaha ugu caansan Jarmalka, kaniisada weyn ee Cologne waa bilaash in la booqdo. Qaab dhismeedkeeda Gothic, daaqadaha muraayadaha rinjiga ah, aragtiyada webiga waa kuwo kacsan. Hadaad jeceshahay fanka, markaa Cologne ayaa leh matxafyada waaweyn ama farshaxanka waddooyinka xiisaha leh gudaha Ehrenfeld. Goobtani waa sinta iyo qaybta isbadalka ah ee Cologne, tag-meesha-loogu talagalay qaxwada iyo guridda.
Sida aad arki karto Cologne waa magaalo la yaab leh miisaaniyad-saaxiibtinimo u safraya Yurub. Iskusoo wada duuboo, waxa ugu fiican ee ku saabsan waa gaadiidkeeda hufan oo la awoodi karo. Gaadiidka Jarmalka, tareenka tareenka, taraamka waa mid aad u raaxo badan oo hufan, markaa waxay kuu badbaadinaysaa waqti badan oo aad ku dhex wareegto. Helitaanka kaarka maalinlaha ah ama usbuuclaha ah waa hab fiican oo loo maro badbaadiyo lacagta halka safraya.
Qiimaha Tareenka ee Berlin illaa Aachen
Qiimaha Tareenka ee Frankfurt ilaa Cologne
Qiimaha Tareenka ee Dresden ilaa Cologne
Qiimaha Tareenka ee Aachen ilaa Cologne
Waffles quraac waxaadna diyaar u tahay inaad sahamiso dhammaan 80 buundooyinka iyo harada jacaylka, Minnewater. Baaruuddu waa a magaalo qadiimiga ah gudaha Beljam iyo meelaha ugu jaban ee lagu booqdo Yurub. Laga soo bilaabo tiro aad u fiican oo qalcado ah ilaa a doon ku raacda kanaallada, waxaa jira waxyaabo badan oo la awoodi karo oo lagu sameeyo Bruges, tareen ka raacaya Brussels.
Hadaad rabto inaad xoogaa kabato, markaa waa inaad hubaal ku bixisaa waqti iyo qayb ka mid ah miisaaniyaddaada maalinlaha ah shukulaatada. Raadi calaamadda ‘gacanta lagu sameeyay’ dusha 50 oo ka mid ah dukaamada shukulaatada magaalada loogu talagalay shukulaatada ugu fiican Belgium.
Bruges ’cabbirka yar iyo qorsheynta magaalada waa mid aad u fudud in lug lagu sahmiyo, marka waa inaadan waqti ku qaadin gaadiidka. Dhab ahaan, hab fiican oo lagu sahaminayo magaalada oo wax looga barto dhaqankeeda iyo hidaheeda waa iyada oo lagu biiro socdaal lugeyn bilaash ah. Sidan ayaad ku heli kartaa dhammaan talooyinka gudaha ee makhaayadaha la awoodi karo, dukaamaysiga xusuusta, iyo habka ugu wanaagsan ee lagu booqdo meelaha ugu soo jiidashada badan.
Qiimaha Tareenka Amsterdam ilaa Bruges
Qiimaha Tareenka ee Brussels ilaa Bruges
Qiimaha Tareenka ee Antwerp
Qiimaha Gawaarida ilaa Qiimaha Tareenka
3. Meelaha ugu Awooda Badan Yurub: Czech Krumlov, Czech Republic
Czech Republic waa mid ka mid ah meelaha ugu jaban ee loogu safro Yurub, oo sidaas awgeed magaalada quruxda badan ee Cesky Krumlov ayaa liiskayaga ku jirta. Magaaladan midabada leh waa dalxiis-saaxiibtinimo oo ka sarreeya dhammaan, miisaaniyad-saaxiibtinimo. Waxaad ku arki doontaa mid aad u fudud sahaminta iyo ku raaxeysiga naftaada cunnada Czech, biir qabyo ah, iyo indha indheynta iyadoo aan wax lacag ah laga bixin miisaaniyadda safarkaaga.
First of dhan, Cunitaanka banaanka ayaa ah mid aad u jaban, oo waxaad ka heli kartaa menus qado weyn oo bixiya bilowga, koorsada ugu weyn, iyo biirka qiimaha qosolka leh. Beerku wuu ka jaban yahay biyaha dhammaan Czech Republic oo wuxuu ku darayaa sausages caan ku ah, waxaad naftaada u sameysay casho sharaf.
Magaaladu waxay kaloo hoy u tahay qalcado iyo beero cajaa’ib leh oo si bilaash ah loo booqan karo, iyo haddii aad rabto inaad kor ugu kacdo aragtida astaamaha, markaa khidmadda gelitaanka munaaradda ayaa ka yar 5 euro. Ikhtiyaar kale oo weyn oo lagu sahaminayo magaalada ayaa ah ku biirista safar socod bilaash ah oo aad la kulanto socotada kale ama aad ballansatid a Cesky Krumlov magaalada gaarka loo leeyahay ee socdaalka ku maraya burcadda. Sidan ayaad ku ogaan kartaa sirta magaalada, halyeeyada, iyo talooyin ku saabsan safarka cajiibka ah ee dhulka sheekooyinka.
Hungary waa mid ka mid ah waddamada ugu raqiisan Yurub, oo waxaa jira waxyaabo badan oo laga arki karo Budapest. Eger waa magaalo cajiib ah, leh ilo kulul, Bukk Hungary’s park qaranka, iyo astaamo qurux badan oo la soo booqdo. Dhamaan yaababkan waa la heli karaa iyadoon wax u dhimeynin miisaaniyadda safarkaaga.
Eger waa mid ka mid ah magaalooyinka caanka ah ee Hungary waxaana ku yaal khamri cas oo macaan, oo kuyaala inta udhaxeysa buuraha Bukk. Muuqaallo muuqaal ah aragtida dabiiciga ahi waxay u samaysaa goobta ugu habboon Dhadhaminta khamri ka dib maalin weyn oo tamashleyn ah oo qurux badan oo ku taal Bukk park iyo nasashada ilaha dabiiciga ah. Maaddaama Hungary ay hoy u tahay qaar ka mid ah ilaha dabiiciga ee ugu wanaagsan Yurub, ku qoy kul-kululeeyaha waa lama huraan.
Eger wuxuu ku habboon yahay isbuuca nasashada ee Budapest. Xulashada inta u dhaxeysa safar maalinle ah ama biririfta magaalada Budapest adigaa iska leh, laakiin waxaan kugula talineynaa inaad ugu yaraan usbuuc dhammaad ah ku qaadato magaaladan xiisaha badan.
5. Meelaha ugu Awooda Badan Yurub: Cinque Terre, Italy
Guryo midab dhalaalaya, fadhiya Sentiero Azzurro qurux badan, ka dhig Cinque Terre mid la yaab leh oo Talyaani ah. Cinque Terre waa mid ka mid ah meelaha ugu jaban ee loogu safro Yurub iyo Talyaaniga. Ma jiraan wax la barbardhigi karo dareenka safarka raaxada iyo dhaqsaha u dhexeeya 5 dhibco cajiib ah. Qaabkan safarka wuxuu kuu badbaadin doonaa waqti badan iyo lacag aad la socoto kaarka tareenka ee Cinque Terre.
Sida hoy, inaad La Spezia ka dhigato saldhiggaaga safarku waa ikhtiyaar weyn. Waa magaalo xeebeed Talyaani ah oo qurux badan leh hudheello iyo hudheelo badan oo la kala doorto.
Cinque Terre mashquul badan yahay oo qaali ah inta lagu jiro xilliga sare. Sidaa darteed, waxaa fiican inaad booqato inta udhaxeysa Abriil-Juun xagaaga ama Oktoobar-Nofeembar si aad ula dhacdid quruxdeeda dabiiciga ah deyrta.
La Spezia ilaa Riomaggiore Qiimaha Tareenka
Florence ilaa Riomaggiore Qiimaha Tareenka
Qiimaha Modena ilaa Riomaggiore Qiimaha Tareenka
Livorno ilaa Qiimaha Tareenka ee Riomaggiore
Hoyga Mozart, Dhismaha Baroque, Schonbrunn Palace, iyo cowska cagaaran, Vienna waa rabbaani ah. Halka qaarkood ay dhihi karaan waa qaali, safarka caasimada Austria gabi ahaanba waa wax la qaban karo oo aan ka fogaan doonin miisaaniyada safarka maalinlaha ee caasimadaha kale ee yurub sida Prague ama Budapest. Magaalada waa dalxiis ku habboon, sidaa darteed waad u bogi kartaa dhaqanka hodanka ah, cunnada, iyo soo jiidashada nolosha Viennese, adigoon wax u dhimaynin keydinta noloshaada.
Caasimadda Austria waa mid ka mid ah meelaha ugu jaban ee la booqan karo Yurub, mahadsanid heshiisyadeeda dalxiiska ku habboon. Tusaale ahaan, Kaarka Vienna wuxuu kaa heli doonaa qiimo dhimis weyn Matxafyada, soo jiidashada, iyo gaadiidka dadweynaha. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dhadhamin lahayd khiyaanada ugu fiican ee Viennese makhaayadaha Vienna qaarkood, waqtiga qadada. Makhaayado iyo makhaayado badan ayaa bixiya a 2-3 koorsada dejisan ee kayar € 10.
Habeen ka bax dhaqanka iyo muusigga, makhaayado badan ayaa leh bandhigyo muusig oo toos ah oo bilaash ah. laakiin, haddii aad indhahaaga qabato habeen ka tirsan opera-ka caanka ah, markaa waa inaad indhahaaga ku haysaa helitaanka tikidhada waxqabadka taagan, maaddaama ay si weyn uga jaban yihiin tikidhada opera-ka caadiga ah.
7. Meelaha ugu Awooda Badan Yurub: Normandy, France
Xeebaha dahabiga ah, halyeeyada Joan of Arc of Ruen, jasiiradda Mont St. Keniisad Michel, waa uun dhawr ka mid ah jawharadii ku jiray Normandy. Gobolkan quruxda badani waa safar laba saacadood ah oo ka yimaada Paris, laakiin ka duwan caasimada Faransiiska, waa mid ka mid ah meelaha ugu jaban ee lagu safro Faransiiska.
Normandy waxaa inta badan loo yaqaanaa xeebaha soo degida ee WWII. Si kastaba ha ahaatee, waxay hoy u tahay buuraha Etretat, Dhagaxyada waaweyn ee nuuradda weyn, yaab yaab dabiici ah. Tuulada Scenic Giverny ee uu ku noolaa Claude Monet kuna rinjiyeeyay ubaxyada caanka ah waa meel kale oo aan lagu seegi karin adiga safarka Normandy.
Si aad u soo gabagabeyn, safarka Yurub waxay noqon kartaa tacabir aad u jaban. Normandy, Cinque Terre, Vienna, Eğer, used, Cologne, iyo Cesky Krumlov, waa 7 meelaha la awoodi karo ee loogu safro Yurub. Tilmaamaheena ayaa kaa ilaalin doona inaad naftaada ku badbaadiso hal maalin oo fasax ah waxayna hubineysaa inaad haysato safar xusuus leh oo qaas ah.
halkan at Save A tareenka, we will be happy to help you plan your vacation to the most affordable places in Europe by train.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "7 Meelaha ugu Awooda Badan ee Lagu Safri Karo Yurub" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://embed.ly/code?url =Https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
affordabletravel miisaaniyad cheaptravel czechrepublic TrainTravelBelgium TrainTravelHungary travelfrance travelgermany